पूर्व मन्त्रीका छोराको कर णी घटना ६ वर्ष सम्म लुकाइयो, बुवा मन्त्रीवाट हटे पछि घरवाटै पक्राउ परे? – Hamro24News
पूर्व मन्त्रीका छोराको कर णी घटना ६ वर्ष सम्म लुकाइयो, बुवा मन्त्रीवाट हटे पछि घरवाटै पक्राउ परे?
July 20, 2021 adminLeaveaComment on पूर्व मन्त्रीका छोराको कर णी घटना ६ वर्ष सम्म लुकाइयो, बुवा मन्त्रीवाट हटे पछि घरवाटै पक्राउ परे?
एजेन्सी । पहुँचको आडमा मानिसले कति ठुलो दुष्कर्म गर्छ भन्ने कुराको उदाहरण हालै देखिएको छ । बुवा मन्त्री रहँदा सम्म उनका छोराले गरेका सबै नराम्रा काम छोपिए । उनले बुवा मन्त्री भएको आडमा यति धेरै कानुनले वर्जित गरेका काम गरे तर त्यसको कतै उजुरी भएन । तर अहिले बुवा मन्त्रीवाट हटे लगत्तै उनका सबै कामका पोल खुलेका छन् । यो घटना भारतको हो । जम्मूको डोमाना पुलिसले ६ वर्ष पुरानो कर णी घटनामा मन्त्रीको छोरालाई पक्राउ गरेको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
पूर्व मन्त्री अब्दुल गनी वकिलको छोरा अबिद घनीमाथि कक्षा ७ की बालिकालाई कर णी गरेको आरोप लागेको छ । यति मात्र होइन, बंगलोरमा अब्दुल गनीको छोरोले बंलोरमा २०० युवतीलाई दु ब्र्य व हार गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ । यो कुरा पक्राउ परेपछि उनले आफै स्वीकार गरेका छन् ।
जानकारीका अनुसार ती ७ कक्षामा पढ्ने बालिका डोमाना क्षेत्रको खेलकुद कार्यक्रममा भाग लिन गएकी थिइन् । कार्यक्रम पछि, बालिका जब घर फर्कन लागिन् आबिद र उनको साथीले बालिकालाई रोके । बालिकालाई हामी तिम्रो बुवाको साथी हौं बुवाले तिमीलाई लिएर आउनु भनेर हामीलाई पठाउनुभएको हो भनेर बालिकालाई फकाए ।
जब ति बालिका उनीहरुको कारमा बसिन् उनलाई तालाब टिल्लोको क्वार्टरमा लगे । उनलाई कर णी गरे । मन्त्रीको छोरा भएका कारण यसवारेमा कहिल्यै कारवाही भएन । अहिले उनका बुवा मन्त्रीवाट हटेपछि घटना सार्वजनिक भएको छ । उनी अहिले पक्राउ परेका छन् ।
गत महिना प्रहरीले उनलाई काश्मिरको सोपोरमा उनको घरवाटै पक्राउ गरेको हो । आबिद घनी आफ्नो बुबा अब्दुल गनी वकिलसँग उनको घरमा बस्थे।
काठमाण्डौंमा बज्यो खतरा’को घ’ण्टी ! ज्यान गुमाउनेको संख्या एक्का’सी बढ्न थाल्यो?
‘छोरी भन्दा आमा तरुनी’ आमा कुन हो छुट्याउने जिम्मा तपाईहरुकै